तिथि मेरो पत्रु »5एक Wingman हुनु को नियम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 12 2020 |2मिनेट पढ्न
आफ्नो पक्ष द्वारा एक विश्वसनीय र विशेषज्ञ wingman तपाईंलाई एक सुन्दर महिला वा एकल संग छोड कि निर्धारण गर्न सक्छन्. तल, हामी परम wingman हुनुको लागि सबै भन्दा राम्रो नियम बसालेका छन्.
नियम #1: जसले पहिलो नजिकिंदै, छनोट
इमान्दारी पुर्वक, यो कारणले गर्दा तल गोली वा यसलाई बन्द मार छैन भइरहेको जोखिम गर्न महिला को एक समूह दृष्टिकोण र कुराकानी प्रहार गर्न साहस लिन्छ. यो पनि महिला सही तरिका दृष्टिकोण गर्न कौशल लिन्छ. त्यसैले हाम्रो पहिलो नियम: जसले सफलतापूर्वक पहिलो नजिकिंदै, महिला पहिलो विकल्प हुन्छ.
नियम #2: आफ्नो मित्र सही व्यवहार
महिला अवलोकन देखि विशेष गरी मानिसहरू बारेमा धेरै कुरा सिक्न तिनीहरूले रुचि हो. आफ्नो मित्र जस्तै ऐन तपाईं चिन्ने coolest मान्छे हो. मात्र यो विश्वास बन्द radiate हुनेछ तर एक महिला तत्काल धेरै बढी आकर्षित हुनेछ. तपाईं दस मिनेट को लागि जानिन्छ छन् एक महिला लागि आफ्नो मित्र Ditching बस तपाईं लागिपरेको हो भनेर देखाउँछ.
नियम #3: अनुपात आदर
आफ्नो मित्र महिला को एक अनौठो नम्बरमा कुरा छ भने, समूह अनुपात सन्तुलनमा मदत गर्न दृष्टिकोण कि लिन एक क्यू रूपमा. सम्झना, विशेष गरी एउटा केटी संग यो बन्द मार तपाईं अन्त भने, तपाईं अझै समूहसँग रहनुपर्छ. स्त्री संग छोडेर आफ्नो मान्छे wingman कम छोड्न हुनेछ जो तपाईं असफल अर्थ. अनुपात पनि छ भने मात्र समय यसलाई छोड्न ठीक छ. यसरी दुवै सुन्दर महिला संग एक्लै समय प्राप्त.
नियम #4: के र आफ्नो मित्र असमर्थ के हो भन्न
यो नियम wingmen लागि महत्वपूर्ण छ. आफ्नो मित्र बाथरूम जान्छ वा एक पेय पकड लिन्छ नभएसम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस् र एक गैर-सीधा बाटो मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गुण कुरा. बोनस अंक लागि, सीधा उहाँले रुचि छ केटी कुरा छैन. उनको मित्र कुरा र तिनीहरूले दोहोरिनु सम्म प्रतीक्षा.
आफ्नो मित्र पनि प्रत्यक्ष जोगिन मदत गर्न, यो रात तल घुमावदार सुझाव छ जस्तो देखिन्छ जब अन्तिम पेय वा छत एक पैदल अप अद्भुत दृश्य रमाइलो गर्न.
नियम #5: खेल जस्तै ऐन माथि छ
एक पल्ट तपाईं आफ्नो मित्र र स्त्रीको बीचमा कि स्पार्क हेर्न उहाँले रुचि छ, अभिनय र कुराकानी सुरु तिनीहरूले पहिले नै एक जोडी छन् जस्तै. यो प्रविधी “फ्रेमिङ”, रूपमा महिला के वास्तवमा भन्नुभयो भइरहेको छ द्वारा भन्दा बढी उप-संचार प्रभावित छन् एउटा अचम्मको प्रभाव हुनेछ.
हातमा यो क्षेत्र पुस्तिका संग, तपाईं अब शहर मा एक सफल रात बाहिर छ तयार छन्.